Warshad Vase Glass - Soosaarayaasha Cake Glass Glass Shiinaha, shirkado
Waxaa loo sameeyay sidii muraayad u adkeysata kuleylka, waxaad yeelan kartaa ubax la qalajiyey ama hydroponics si aad u qurxiso booskaaga.
Qaababka yaryar ee quruxda badan iyo dhirta cagaaran waxay ku dari doonaan tamar badan gurigaaga ama xafiiskaaga gurigaaga ama xafiiskaaga.
Ku habboon miiska, kursiga keydka, golaha wasiirada iyo qurxinta shaqada, gaar ahaan nolol maalmeedka iyo arooska.
Fikradda Qurxinta Weyn ee guriga, beerta, Arooska ama ciidaha. Waxay kaa caawinaysaa qurxinta iyo nadiifinta gurigaaga ama xafiiskaaga, oo kuu ah qurxin wanaagsan
Qurxinta qurxinta wanaagsan ee leh ubax ku habboon, meel bannaan oo xarrago leh, ayaa ku faraxsan indhaha.
★ Qalabka: Muraayadda
★ Midab: Cagaar, Cawl, Buluug, Casaan, Dhaldhalaal
★ Xirmo ubax fareso oo dhameystiran qeyb ahaan wuxuu ka yimaadaa quruxda alaabta ubaxa qeybna wuxuu ka yimaadaa ilaalinta weelka. Qalabkan ubaxa, wuxuu siiyaa guri raaxo leh ubax tiro badan.
★ Afka weelka waa la safeeyey, wareegsanaa oo siman yahay iyadoo aan gacanta la dhaawicin.
★ Hoosta dhalada waa la qaro weyn yahay waxaana loo dhigaa si habsami leh oo adag
Faafiye cadarka wareega
Weelka dhalada ayaa laga sameeyay wax tayo sare leh, labada dhinacba iyo gunta hooseba waa naqshad dhumuc weyn oo taagan. Afka dhalada afkiisa waa siman yahay, ubaxuna ma xoqaayo gacantaada.
Naqshadeynta xariiqa xariiqa xargaha ayaa ka dhigaysa mid gaar u ah qurxinta, ku caddee jaleeca inaad ilaalin karto jirida.
Isku darka yutiilitida iyo bilicsanaanta, dhalada qurxinta qurxinta wanaagsan ee qurxinta ubaxa ama abuuridda abuurka; Naqshad fudud laakiin si fudud loogu qurxiyo qaabab kala duwan.
Weelka ubaxyada dhalada ah wuxuu ku fiican yahay gurigaaga, xafiiskaaga, kafeegaaga, qolka jiifkaaga iyo wixii la mid ah. Isku darka ubaxyada quruxda badan iyo dhalooyinka waxay ku noqon karaan muuqaal qurxoon booskaaga.